တော်ဝင်စင်တာတွင် မိန်းကလေးကို ဓားဖြင့်ထိုးသူ၏ ဓာတ်ပုံများ ရဲတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန် ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
တော်ဝင်စင်တာတွင် မိန်းကလေးကို ဓားဖြင့်ထိုးသူ၏ ဓာတ်ပုံများ ရဲတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Sunday, February 21, 2016 News No comments
Sun, 2016-02-21 11:59
No.1016 Sunday, February 21, 2016
Yangon Police ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်က ထုတ်ပြန်သည့် ဓားထိုးမှုကျူးလွန်သူ၏ ဓာတ်ပုံများ (ဓာတ်ပုံ − Yangon Police)
ဒဂုံမြို့နယ် ပြည်လမ်း ပေါ်ရှိ တော်ဝင်ဈေးဝယ်စင်တာ ပထမထပ်တွင် အရောင်းဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးငယ်ကို ဓားထိုးမှုကျူး လွန်သည့် အမျိုးသားဓာတ်ပုံအား Yangon Police ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာ မျက်နှာ၌ ဖော်ပြထားပြီး တွေ့ရှိ သူများ သတင်းပေးပို့နိုင်ရန် အကူအညီတောင်းခံထားကြောင်း သိ ရသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက် ညနေ ၅ နာရီခန့်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အဆိုပါ ဓားဖြင့်ထိုးသွားသူကို လိုက်လံရှာဖွေနေပြီး ဓားထိုးခံရသူ အသက်(၂၀)အရွယ် မခင်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးကို စစ်ဆေးမေးမြန်းနေ ကြောင်း ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်း ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦး က ပြောသည်။
‘‘ကလေးမလေးက မျက်နှာ ကို ဓားထိထားတော့ စကားပြော တဲ့အခါ အရင်လောက် အသံမထွက်ဘူး။ သူတို့နှစ်ယောက် အွန်လိုင်းကနေ သိတာလို့တော့ ပြော တယ်။ ကောင်မလေးကို ပြန်တော့မယ် လိုက်ပို့ပေးဆိုပြီး ပါ လာတဲ့ ခေါက်ဓားနဲ့ ထိုးတာပါ။ တရားခံကိုတော့ လိုက်နေတုန်း မမိသေးပါဘူး’’ဟု ၎င်းက ပြော သည်။
တော်ဝင်စင်တာ ပထမထပ် တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဖက်ရှင် နှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းဆိုင်တစ် ဆိုင်ရှေ့၌ ဓားထိုးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ဓားထိုးခံခဲ့ရသည့် အမျိုးသမီးငယ်သည် မျက်မှန်ဆိုင်တစ် ဆိုင်မှ အရောင်းစာရေးဖြစ်သည် ဟု ဓားထိုးမှုကို မြင်တွေ့ခဲ့သူများ က ပြောသည်။
‘‘အခုလို လူစည်ကားတဲ့ ကုန်တိုက်တွေမှာ လုံခြုံရေးလည်း ရှိ တယ်။ သူ ကုန်တိုက်ထဲဝင်တော့ သူ့ကို ဘယ်လိုမှ မရှာတဲ့အတွက် ဓားပါလာတာပေါ့။ ဓားအစား သေနတ်တို့လို၊ ဗုံးလိုဟာမျိုး ပါ လာပြီးထားခဲ့ရင် ဘယ်လိုလုပ်မ လဲ။ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေ သေ ချာရှာသင့်တယ်’’ဟု ဒဂုံမြို့နယ် နေ ကိုမင်းကပြောသည်။
ကုန်တိုက်များတွင် လုံခြုံရေးအတွက် စက်ပစ္စည်းများနှင့် လုံခြုံ ရေးဝန်ထမ်းများ ထားရှိသော် လည်း စစ်ဆေးသည့်အခါ အား နည်းမှုများရှိပြီး သေချာစွာ စစ်ဆေးသည့် ဝန်ထမ်းမရှိကြောင်း ကမာရွတ်မြို့မရဲစခန်းမှ ရဲမှူး ဇော်ဝင်းက ပြောသည်။
ဓားဖြင့်ထိုးကာ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်နေသည့် အသက် (၂၅)နှစ်အရွယ် အမျိုးသားကို ဒဂုံမြို့မရဲစခန်းက ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၂၆ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သိရပြီး အဆိုပါ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို တွေ့ရှိပါက ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး- ၀၁-၂၃၀၀၇၄၇၊ အနောက်ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး- ၀၁-၃၇၆၁၆၆၊ ဒဂုံမြို့မရဲစခန်း- ၀၁-၃၇၄၄၂၇ သို့ သတင်းပေး တိုင်ကြားနိုင် ကြောင်း သိရသည်။
unlock sim for true v0.7, v1.1, v.1.4, v1.5unlock true speedy 4G 4.0 Hard reset true smart max4.0
ကဲ...ကျွန်တော့်ဖုန်းကို sim unlock လုပ်နိုင်သွားပါပြီး true 3g version 1.1လေးပါ. လိုချင်သူများအတွက်..ဖရီးတင်ထားပေးတဲ့ လင့်မှာ လ...
♪ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော - “ HTC ONE M9 “ ♫
♪ “ Marshmallow သို့ အဆင့်မြင့်သည့်အခါ ANDROID 6.0...
♪ “ Sony Xperia Z5 “ ♫
စစ်တွေတွင် န၀မတန်း မေးခွန်းပေါက်ကြား၍ ၄ နာရီကြာ နေ...
ဒဂုံ-ဧရာ အဝေးပြေးဝင်း အရှေ့ဘက်ရှိ ကျူးကျော်တဲ၌ နေထ...
(၄ လွှာ)က ပြုတ်ကျတဲ့ ခလေး (၃လွှာ)ရဲ့ ဆန်းရှိတ်အမိုးေ...
Voyeurism (2015) 720p HDRip 600MB
ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံဆောက်ခွင့် ဖဲကြိုးနက်ဆရာဝန်များအဖွဲ့ ...
ရွှပြည်သာမြို့နယ်တွင် ဂက်စ်ပိုက်လိုင်းယိုစိမ့်ရာမှ ...
မန်မာလုပ်သား (၂၀၀)ကျော်အား အကြောင်းမကြားဘဲ အလုပ်ထု...
သီချင်း Lyrics တွေ Facebook မှ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Riffstation Guitar Software v1.4 Full + Crack and ...
ဂီတာ သင်ခန်းစာတွေ အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ..
လွှတ်တော်တွင် အစိုးရက လာမရှင်းပြတော့ဟု သမ္မတ ပြောခွင...
Followers Gadget for Blog
ဘိန်းဖျက်ဆီးသူတွေ ရိုက်နှက်လို့ ရွာသား ၅ ဦး ဆေးရံ...
ထိုင်းရောက် မြန်မာတွေ လုပ်အားခ အပြည့်မရလို့ တိုင်
သတ်မှတ်စည်းကမ်းကျော်၍ အစိုးရတပ်ရိက္ခာယာဉ်တန်းကို ပစ...
iOS Mail App မှာ Unread Folder ကိုဘယ်လို ထည့်သွင်း...
♪ အားလုံးပဲကြည့်ချင်နေကြတဲ့ - Deadpool (2016) ♫
Android ဖုန်းများတွင် ဖုန်းမှတ်ဉာဏ်ရှိ မလိုအပ်သော ...
Android OS ဖုန်းများတွင် App ကို Uninstall လုပ်၍မရ...
CHERRY MOBILE ME VIBE X170. V 4.4.2 @FLASH TOOL FI...
Samsung Galaxy Grand Prime VE SM-G361H ဖုန်းကို TW...
AVS VIDEO CONVERTE 9.0.1.566 ACTIVATED (NO CRACK )...
သူငယ်ချင်းတွေအတွက် All 2Line Apps တွေကို စုစည်းပြီ...
How To AddaContact Form onaBlogger Blog
ဘလော့ဂ်ရေးသားသူများအတွက် Custom Font Embed ဖို့နည်...
သမ္မတတာဝန်လွှဲမည့် အစီအစဉ်အသေးစိတ် အန်အယ်လ်ဒီနှင့် အ...
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်မှူးကို ပြန်တရားစွဲမည်ဟု ၈၈ငြိမ်...
ပေါင်ဒါသုံးစွဲသူ ကင်ဆာဖြစ်သေဆုံး၍ Johnson & Johnso...
♪ မိမိဝင်ထားတဲ့ Facebook Groups တွေကိုမြန်ဆန်စွာဝင...
" မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြို့များ၏ မိုင်အကွာအဝေးများ "
♪ MEC ငွေဖြည့်ကတ်များကို လိုသလောက် ပြန်လည်ထုတ်ပေးေ...
နာမည်ကျော်တွေ ညတိုင်းလုပ်တဲ့ အလေ့အကျင့် (၅) ခု
အာရှ-ပစိဖိတ် လိင်နှင့် မျိုးဆက်ပွားဆိုင်ရာ ဆွေးနွေ...
မြန်မာ့စီးပွားရေး ၅ နှစ်အတွင်း လျှင်မြန်စွာ တိုးတက...
မြန်မာအချင်းချင်း ပစ်သတ်သူ ၂ ဦး ဖမ်းဆီးရမိ
တောကိုတော့ ရှင်းလင်းပါ၊ သစ်ပင်ကိုတော့ မခုတ်လှဲပါနှ...
ကုသနည်း-နှလုံးသွေးကြေကျဉ်း အသည်းခြောက် ရောဂါတွေဟာ ...
True Smart 3.5 ဖုန်းတွေကို ဘာ box မှ မသုံးဘဲ Unloc...
TELECom Android Anti-Malware 3.1.2 (Update Version...
Regeneration Ghost Push Remover v1.0 (Android Ghos...
"အနာဂတ်ကာလ Will နဲ့မေးမြန်းပုံလေးကို လေ့လာကြည့်ကြရ...
ဓါတ်ပုံပေါ်မှာ စာတန်းထိုးပြီး ကာလာအမျိုးမျိုး ချယ်မ...
♪ “DOOGEE NOVA Y 100X” ♫
တော်ဝင်စင်တာတွင် မိန်းကလေးကို ဓားဖြင့်ထိုးသူ၏ ဓာတ်...
BYPRASS GOOGLE ACCOUNT REMOVE TOOL FOR ALL LG
အင်တာနက်မှသီချင်းများကို ဒေါင်းလော့ချယူနိုင်မည့် M...
ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်ဖုန်းထဲမှာ ရှိတဲ့ App,Music,Vide...
မိန်းကလေးဖစ်ဖစ် ယောကျာင်္းလေးဖစ်ဖစ် ... ကိုယ့် wall...
ဘဝမှာ......... အောင်မြင်သူတွေနည်းပါးပြီး ကျရှုံးသူေ...
မိမိ Facebook Account အား Hack မခံရအောင် ဘယ်လို ကာ...
သင့်ပြောရမဲ့ စကားကို သတိထားပါ။
အပြာကားကြည့် သံဃာတော်ဓာတ်ပုံ ထိုင်းလူမှုကွန်ရက်တွင်...
Free Call နှင့် Messageတွေပို့မယ် - LINE: Free Cal...
မျိုးသူရ - အခမဲ့ Website များရေးတင်နည်း (13.3 MB)
CSS3for webdesigner
Apress Beginning NetBeans IDE for java developer စ...
Java A Beginner Guide 2nd Edition (3.2 MB)
Learn C++ Programming Language - Became A Complete...
Starting out with Java From Control Structure thro...
Programming with Microsoft Visual Basic 2012 (57.5...
Bruce Eckel - Thinking In Java 4th Edition (5.7 MB...
Effective Java - 2nd Edition (2 MB)
Beginning Programming with Java For Dummies - 2nd,...
Head First Java Second Edition (41.4 MB)
java how to program early objects 10th edition (15...
Java Persistence with MyBatis3(3.3 MB)
Ben Klemens (O'Reilly) - 21st Century C (8.4 MB)
Biplab Kumar Modak (Packt Publishing) - C++ Applic...
Java and XML (5.2 MB)
ဦးအောင်မြင့် - Learn C (Part I) (26.3 MB)
C Programming for the Absolute Beginner 2nd Editio...
Oppo R829 MT6582 Display Error Fix Tested 100%
PRIDE AND PREJUDICE AND ZOMBIES (2016) CAM-TS 800 ...
SAVING MR. WU 2015 HD720P 800MB
ဖိုတိုရှော့နဲ့ ကိုယ်ဓါတ်ပုံတွေကို ဘောင်အလှနဲ့လန်းခ...
HACKER ပိုင်းကိုလေ့လာချင်ကြတဲ့သူတွေအတွက် သင်္ခန်းစာမ...
ဖုန်းမှာ ဓါတ်ပုံတွေကို ဆေးချယ်မှုန်းချင်သူများအတွက်...
အသစ်ကြိုက်သူများအတွက် FACEBOOK MESSENGER ၁၉ ရက်နေ့...
မန်မာပြည်၏ လူဦးရေ ၉၂ ရာခိုင်နှုန်းအား MPT မှ ၀န်ဆေ...
YawStar System Fixer Version 1.0.0.2 ရယူပါ